Alahady – 12/10/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Asao ho aty amin’ny fampakaram-bady avokoa izay rehetra hitanareo.
Tamin’izany andro izany, i Jesoa nanao ity fanoharana ity tamin’ny lohandohan’ny mpisorona sy ny zokiolona nanao hoe: ”Ny Fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny andriamanjaka anankiray izay nanao fanasana tamin’ny fampakaram-badin’ny zanany lahy, ka naniraka ny ankiziny hanainga izay efa nasaina, ho any amin’ny fampakaram-bady, fa tsy nety nankany ireo. Dia naniraka ankizy hafa indray izy nanao hoe: Lazao amin’ny nasaina hoe:’ Indro efa voavoatra ny nahandro ary efa vonona avokoa ny zavatra rehetra, koa tongava aty amin’ny fampakaram-bady ianareo’. Nefa tsy nahoany akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny iray nankany amin’ny sahany, ny iray nankany amin’ny varony, ary ny sasany nisambotra ny ankiziny, ka nony efa notevatevainy dia novonoiny. Tezitra ny mpanjaka nony nandre izany, ka naniraka miaramila nandringana izany mpamono olona izany, sy nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin’ny ankiziny: ‘Efa voaomana ny fanasana amin’ny fampakaram-bady, fa ny nasaina no tsy mendrika. Koa mandehana ianareo any amin’ny fihaonan-dalana, ary asao ho aty amin’ny fampakaram-bady avokoa izay hitanareo. Dia niely eran’ny arabe ny ankiziny, nanangona izay rehetra hitany na tsara na ratsy, ka hipoka ny mpihinana ny trano fampakarana.Ary niditra ny mpanjaka hizaha ny mpihinana, ka nahita lehilahy anankiray tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin’ny fampakaram-bady, dia hoy izy taminy: ‘Ry sakaiza, nahoana ianao no niditra eto, nefa tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin’ny